Ngomthetho we-Congressional Reform Act
Umthetho weChressional Reform Act, kubagxeki abaninzi, izandi ezilungileyo kumaphepha. Umthetho ochaziweyo uya kubeka imida emide kumalungu eNdlu yee-Abameli be-US kunye ne-Senate, kwaye bahlule abagwebi bee- pensions zabo .
Ukuba kuzwakala kukuhle ukuba yinyani, oko kungenxa yokuba.
Umthetho we-Congressional Reform ngumsebenzi weengcamango, uhlobo olushushu lomkhokhwa-ntlawulo lwentlawulo ye-taxfayer oluya kwintsholongwane kwiWebhu kwaye iyaqhubeka ithunyelwa iphinde ithunyelwe kwakhona, ingakhange ijonge iinjongo.
Ilungile lo nto. Ayikho ilungu leCongress eliye lazisa eli bhili-mali-kwaye akukho namnye oya kuthi, anikwe i-imeyile ekhoyo ngokubanzi kunye neengxelo ezikhohlisayo.
Ngoko ukuba uyazibuza xa uMthetho weChressional Reform Act uza kudlulela iNdlu kunye neSeti, nantsi isicatshulwa esincinci: Ngeke.
Umbhalo we-Congressional Reform Act Imeyili
Nantsi enye inguqu ye-Congressional Reform Act imeyile:
Isihloko: UMthetho weNguqulelo weCongress of 2011
Ukulungiswa kwe-26 (ukunika ilungelo lokuvota abaneminyaka engama-18 ubudala) kuthathe iinyanga ezi-3 kuphela kunye neentsuku eziyi-8 ukuba zivunywe! Ngoba? Elula! Abantu bafuna. Kwakukho ngo-1971 ... ngaphambi kokuba ikhompyutha, phambi kwe-imeyile, phambi kweefowuni, njl njl.
Kuzo izilungiso ezingama-27 kuMgaqo-siseko, ezisixhenxe (7) zithatha unyaka owodwa okanye ngaphantsi ukuba ube ngumthetho welizwe ... konke ngenxa yoxinzelelo loluntu.
Ndicela umntu ngamnye ukuba ahambise le imeyile kumncinci wabantu abangamashumi amabini kwidilesi zabo dilesi; Emva koko babuze ngamnye ngamnye ukuba enze okufanayo.
Kwiintsuku ezintathu, abaninzi abantu baseUnited States of America baya kuba nomyalezo.
Le ngcamango enye efuneka ukuba idluliselwe.
UMthetho weNguqulelo weCongressal of 2011
Ixesha lokugqibela. Iminyaka eyi-12 kuphela, enye yeendlela ezikhethiweyo zingezantsi.
A. Imimiselo emiSeti yeminyaka emithandathu
B. Iimpawu zeNyanga ezimbini zeNdlu
C. Ixesha elilodwa leminyaka yeSenate kunye neemithathu zeNdlu zeNyanga ezimbini
Akukho Inkqubo / Akukho Pensheni.
I-Congressman iqokelela umvuzo ngelixa e-ofisi kwaye ayifumana umvuzo xa ephuma eofisini.
I-Congress (yangaphambili, yangoku kunye nekamva) ithatha inxaxheba kwiKhuseleko loLuntu.
Zonke iifowuni kwiNgxowa-mali yokuthatha umhlala-phantsi ye-Congressional iya kwiNkqubo yoKhuseleko lweNtlalo ngokukhawuleza. Zonke iimali ezizayo ziza kuphuma kwinkqubo yoKhuseleko loLuntu, kunye neCongress ithatha inxaxheba kubantu baseMerika.
I-Congress inokuthenga isicwangciso sabo somhlala-phantsi, njengokuba bonke abaseMelika benza.
I-Congress ngeke iphinda ivothe ngokwabo ukuhlawulwa kwentlawulo. Ukuhlawulwa kwe-Congressional kuya kuphakama ngezantsi kwe-CPI okanye kwi-3%.
ICongress ilahlekelwa yinkqubo yokunakekelwa kwempilo yangoku kwaye ithatha inxaxheba kwinkqubo efanayo yokunakekelwa kwempilo njengabantu baseMerika.
I-Congress kufuneka ilandele imimiselo yonke ayimisela abantu baseMerika.
Zonke iikhontrakthi zabasebenzi beConferensi ezidlulileyo kunye nezamanje ziphelelwa ngempumelelo kwi-1/1/12. Abantu baseMerika abazange benze le khontrakthi kunye neCongressmen. Abalawuli beeNkomfa benza zonke izivumelwano.
Ukukhonza kwiNgqungquthela kukuhlonipha, kungekhona umsebenzi. OoBawo abasungula babenomdla wabameli bomthetho, ngoko-ke yethu kufuneka isebenzise iikota (t) zayo, uze uye ekhaya uze usebenze.
Ukuba umntu ngamnye udibanisa ubuncinci babantu abangamashumi amabini ke kuya kuthatha iintsuku ezintathu ukuba abantu abaninzi (e-US) bafumane umyalezo. Mhlawumbi lixesha.
YI YINI INDLELA YAKHO UKUQHUBEKA NGOKWENKULUZA !!!!! Ukuba uvumelana nalapha ngentla, udlulise. Ukuba akunjalo, cima nje
Wena ungomnye wam 20+. Nceda ugcine.
Iimpazamo kwi-Congressional Reform Act Imeyili
Kukho iimpazamo ezininzi kwi-imeyili ye-Congressional Reform Act.
Masiqale ngeyona nto ecacileyo-ukucinga okungalunganga ukuba amalungu eKongameli ayingakhokheli kwinkqubo yoKhuseleko loLuntu. Ziyakufuneka zihlawule irhafu yentlawulo yentlawulo phantsi kwezomthetho .
Kwakhona ubone: Imivuzo kunye neNzuzo yamaLungu eSouth Congress
Kwakunjalo njalo, nangona kunjalo. Ngaphambi kowe-1984 amalungu eCongress awazange akhokhe kwiNtlalo yoKhuselo . Kodwa nabo babengenelungelo lokufaka izicelo zokhuseleko lwezeNtlalo. Ngelo xesha bathatha inxaxheba kwinto ebizwa ngokuba yiNkqubo yeNkonzo yoLuntu yeNkonzo.
Izilungiso zika-1983 kuMthetho woKhuseleko loLuntu wonke amalungu eNgqungquthela ukuba athathe inxaxheba kwiKhuseleko loLuntu ngoJan. 1, 1984, kungakhathaliseki ukuba bangena nini kwiCongress.
Ezinye iziPhene kwi-Congressional Reform Act Imeyili
Njengokuba uhlawule ukuhlawulela, ukulungiswa kweendleko zokuphila ezihambelana nokunyuka kwamaxabiso - njenge-Congressional Reform Act i-imeyile iphakamisa - isebenze rhoqo ngonyaka ngaphandle kokuba iCongress ivotele ukungayamkeli. Amalungu eNkongolo azivotanga ngokwabo ukuhlawula, njengoko i-imeyile ibonisa.
Kwakhona ubone: Ngaphandle kweRecession, Congress Pay Grew
Kukho ezinye iingxaki ze-imeyili ye-Congressional Reform Act, kubandakanywa nebango lokuba onke amaMerika athenge amacebo abo omhlala phantsi. Uphando lubonisa ukuba abasebenzi abaninzi bexesha elizeleyo bathatha inxaxheba kwisicwangciso somhlala-phantsi esixhaswe ngumqeshwa. Amalungu eNkcubeko afumana izibonelelo zomhlala phantsi phantsi kwezicwangciso ezifanayo nakwamanye abasebenzi baseburhulumenteni.
Okwangoku, amalungu eNgqungquthela sele ephantsi kwemithetho efanayo nathi sonke , nangona amabango aphikisana nomthetho we-Congressional Reform Act.
Kodwa masingacibangi kwiinkcukacha. Inqaku liyilo: UMthetho weNguqulelo weCongress of Reform does not a piece of legislation. Nokuba ngaba kunjalo, yintoni amathuba okuba amalungu eCongress avote ukuphelisa i-perks kunye nokubeka ingozi emsebenzini wabo?
Ziziphi iiNkqubo zeeNgxoxo kwiCongress?
Yisiphi isigqibo 'Sense of Congress'?
I-Top 10 Foods yaseHomer Simpson
Iintetho zeSin Dominic
I-MURPHY Igama lomnqophiso kunye neMbali Yentsapho
Ukunciphisa kunye Nesiqingatha se-7 Chords kwi Piano
Uluhlu lwezambatho zamaSilamsi
Iingqungquthela ezingcono ezi-10 kwi baseball: 2016
Konke malunga ne-Orionids Meteor Shower
Inkcazo yeXesha leNkqantosi ekuPhunyezweni kweMipu
Izifundo zaseJapan zokuqala (1)